यी हुन् विश्वभर आतंक मच्चाउने धनी र शक्तिशाली आतंकवादी संगठनहरु
छिटो पैसाको छलखेल हुने यस्तो संगठनका कार्यकर्तालाई तलब बाढ्न, टे«निङ क्याम्पको विकास गर्न, हातहतियार खरिद गर्न, लामो तथा छोटो दुरीका लागि ठुलै खर्चको आवश्यकता पर्छ । आतंकवादी संगठनहरु ऋण लिदैनन् तथा अदृश्य रुपमा आर्थिक कारोबार गर्छन । न त यिनीहरु कुनै स्टक मार्केटमा नै आवद्ध हुने गर्छन् ।
भुमिगत रुपमा अरबौको कारोबार हुने यस्ता संगठनहरुमा लगानी कसले गरिरहेको छ कसैलाई थाहा छैन । भुमिगत रुपमा कारोबार गर्ने यस्ता आतंकवादी संगठनहरुले ठुलो मात्रामा हतियारमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
विश्वमा केही यस्ता आतंकवादी संगठनहरु रहेका छन् जो आर्थिक रुपमा निकै बलिया र खतरनाक रहेका छन् । इजरायलमा रहेर सुरक्षा मामिला हेर्ने विज्ञहरुको अन्तर्वार्ताका आधारमा विफोब्र्सले विश्वकै १० धनी आतंकवादी संगठनहरुको सुची निकालेको छ । उनीहरुले लामो समयको अध्ययनपछि यो विवरण बाहिर ल्याएका हुन् ।
सन् २००२ मा स्थापना भएको यो आतंकवादी संगठनकाृ वार्षिक कारोबार २ विलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । यसको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको ओइल टे«ड, चन्दा अशुली, अपहरण, बैंक लुट्ने जस्ता रहेका छन् । यो संगठनले इस्लामिक स्टेटको सरकार गठन गरी शासन गर्ने तथा इस्लामिक राष्ट्रहरुमा आफ्नो बर्चस्व कायम राख्ने योजनामा अगाडि बढि रहेको छ ।
यो आतंकवादी संगठनको वार्षिक आर्थिक कारोबार १ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको हुने गरेको छ । सन् १९८७ मा स्थापना भएको यो आतंकवादी संगठन प्यालेसनटाइनमा केन्द्रित रहेर आफ्ना गतिबिधिहरु गर्दै आइरहेको छ । सन् २००१ मा इजरायल सेना र सर्वसाधारणमाथि आक्रामण गरी ठुलो क्षति बनाएको थियोृ । यो संगठनले अत्याधुनिक हातहतियार प्रयोग गर्दै आतंक मच्चाउँदै आइरहेको छ ।
कोलम्बियामा रहेर आतंवादी गतिविधि गर्दै आइरहेको यो संगठनको वार्षिक आर्थिक कारोबार ६०० मिलियन डलर भन्दा बढी रहेको छ । विस्तारबादको बारम्बार विरोध गर्दै आइरहेको यस आतंवादी संगठनलाई विभिन्न रुपमा चन्दा आउने अनुमान गरिएको छ ।
लेवनानमा लामो समय सिया मिलिटेडले आतकं मच्चाउँदै आइरहेको हेजबुल्लाह आतंकवादी संगठनको वार्षिक आर्थिक कारोबार ५०० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा धेरै रहेको छ । सन् १९८५ मा स्थापना भएको यो संगठनले लागुपदार्थ ओसारपसारबाट आफ्नो कमाई गर्दै आइरहेको छ ।
अफगानिस्तानमा सन् १९९६ देखि २००१ म एकछत्र राज गरेको तालिवानको वार्षिक आर्थिक कारोबार ४०० मिलियन डलर रहेको छ । सुन्नी इस्लामिक सारिया कानुन पालन गर्ने यो संगठनलाई केही धनी देशहरुले संरक्षण दिएको अनुमान गरिन्छ ।
सन् २००१ मा अमेरिकाको टिवइन टावरमा आक्रमण गरी विश्बभर चर्चा पाएको अलकायदाको वार्षिक कारोबार १५० मिलियन डलर कारोबार हुने गरेको छ । अमेरिकाको आक्रमण पश्चात अलकायदा निकै बलियो भएर विश्वभर कहलिएको थियो । अपहरण, गैरकानुनी व्यवसाय, चोरी जस्ता कार्यहरुबाट पैसा उठाउने काम गर्दै आइरहेको छ ।
७. लस्करे तइबा
पकिस्तानमा रहेर आतंकवादी क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको यो संगठनको वार्षिक कारोबार १०० मिलियन डलर रहेको छ । अनुदानबाट चलेको यो संगठनको मुख्य लक्ष्य काश्मिरलाई भारतको पकडबाट छुटाइ पाकिस्तानमा गाभ्नु हो ।
सोमालियाको सबैभन्दा ठुलो आतंकवादी संगठन हो अलसबाब । बार्षिक ७० मिलियन आर्थिक कारोबार गर्ने यो संगठनको मुख्य लक्ष्य भनेको इस्लामिक क्यालिफेट स्थापना गर्नु हो । अपहरण, गैरकानुनी व्यवसाय, चोरी जस्ता कार्यहरुबाट पैसा उठाउने काम गर्दै आइरहेको छ ।
९. रियल आइरा
वर्षिक ५० मिलियनभन्दा बढी कारोबार गर्ने यो आतंकावादी संगठन उत्तर आयरल्याण्ड, युकेमा केन्द्रित रहेर आफ्ना गतिबिधि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यसको कमाई पनि स्मगलिङ, गैरकानुनी व्यापार, अनुदान रहेका छन् ।
१०. बोको हराम
अफ्रिका केही देशहरुमा पश्चिमी शिक्षा लिनु पाप हो भन्दै आफ्नो संगठन स्थापना गरेको बोको हरामको वार्षिक आर्थिक कारोबार ५२ मिलियन रहेको छ । अपहरण, कसैलाई स्वतन्त्र बनाए बाफत आउने रकम, कर, बैंक लुट्ने जस्ता गतिबिधिबाट कमाइ गर्दै आइरहेको छ ।